Qarax dad Shacab ah ay ku waxyeeloobeen oo ka dhacay Degmada Xamar weyne ee G/banaadir | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Qarax dad Shacab ah ay ku waxyeeloobeen oo ka dhacay Degmada Xamar...
Qarax dad Shacab ah ay ku waxyeeloobeen oo ka dhacay Degmada Xamar weyne ee G/banaadir
Todobo Qof ayaa ku dhimatay 6 qofna way ku dhaawacmeen Qarax galabta ka dhacay Degmadda Xamar weyne ee Gobolka Banaadir, gaar ahaan Maqaaxi aan sidaasi uga fogeyn Beerta nabadda oo la yiraahdo Isa-saar.
Afhayeenka maamulka Gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane oo Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA la hadlay ayaa sheegay in Qaraxaasi ay ku dhinteen 7 qof 6 kalana ay ku dhaawacmeen, isagoo xusay in Ciidamada Amaanka Soomaaliya ay goobta gaareen qaraxa markii uu dhacay kadib, si ay ugu gurmadaan dadka ay waxyeelada soo gaartay.
Waxaa kale oo uu Afhayeenka Gobolka Banaadir uu sheegay in dhammaan dadkii Qaraxaasi dhibka uu kasoo gaaray ay yihiin dad Shacab ah oo aan waxba galabsan, waxaana uu tilmaamay in Argagixisada ay diidan yihiin Horumarka ay hiigsaneyso Caasimada iyo Nabadda Shacabka Soomaaliyeed ay darreemayaan.
Dadkii ku dhaawacmay qaraxan ayaa la gaarsiiyay goobaha caafimaadka ee Magaalada Muqdisho, Intaas kaddibna gaadiidka Nadaafadda gobolka Benaadir ayaa goobta soo gaaray, kuwaasi oo waddada ka bilaabay howlo nadaafadeed.
Previous articleMadaxweyne ku-xigeenka Labaad ee Jubba Land oo kormeeray howsha ka socota Garoonka diyaaradaha Kismaayo +Sawiro
Next articleMaamulka Hirshabeelle iyo AMISOM oo kawada hadlay furista wadada isku xirta Muqdisho iyo beledweyne